U-Anna Banshikova wazala umntwana
U-Anna Banshchikova wazala umntwana, le nyathelo ebomini bakhe yaqala ukususela ekudlulileyo, apho izinto ezininzi ezingaqhelekanga kwaye zingenakwenzeka kakhulu. Inxalenye yokuqala yintlanganiso kunye noMax.
U-Anna ubonakala ngathi ibali lethu kunye noMax laqala kwaye laphela kakhulu. Iziganeko ezininzi zenzeke ebomini bam emva kokuhlukana naye. Kodwa ndiyakhumbula uLeónidov ngokudabuka kwaye andazi ukuba kutheni kuvela kwintlungu okanye inecala. Ekupheleni kweminyaka engama-80, i-quartet ethi "Imfihlelo" yafumana ukuthandwa ngokuthe tye. Ngokukodwa eSt. Petersburg. Wonke umntu wayemthanda, nangona isizukulwana esidala. Ngenxa yokuba abafana abavela "kwiNgcaciso" nangona baveza ama-hooligans, eqinisweni babedalwa kakuhle, amakhwenkwe amnandi. Umama wathi: "Khangela, yintoni elungileyo, ihlakaniphile." Kodwa ayenjalo uhlobo lwam. Ndandithandana nelitye kwaye ndaza ndaya kuGrankshikov. Ukusuka ekhoneni lentendlebe yakhe weva ukuba uLeonidov wabuyela kwaSirayeli, kodwa kwakungekho nto yam. Ndaphumelela esikolweni esiphakamileyo, ngoko i-theater iziko. Ndangena kwiKomissarzhevskaya Theater. Ngenye iminihlwa ndamenywa ukuba ndidubule inkqubo yeTV. Ndiza: kwi studio yexinzelelo kwaye ngokukhawuleza uLeónidov kunye nomlawuli wakhe uSasha angena. Babonakala - kunye nabo bonke abantu ngeenxa zonke ngandlela-thile baba yincinci, baqhambile, ngenxa yokuba le mibini yayingumnandi. Ngokukhawuleza, ubude, bukhanyayo. UMaxim, endiyicinga ukuba "unyana wam omncinci," wahluke kakhulu emva kokufuduka-okuqinileyo, okunzulu. Kwaye kubaluleke kakhulu - abadala. Ngelo xesha wayeneminyaka engamashumi amathathu nantathu okanye amathathu anesine, kwaye ndandineminyaka engamashumi amabini. Saziswa. Sijonge omnye nomnye, kwaye konke ... Xa uqala ukubona kukho uxhulumano olungabonakaliyo no-Anna - oku kungenanto yokudideka. Ukukhutshwa kombane, ukuphahlazeka kwamanzi phakathi kwabantu, kwaye bahlaselwa ekuthandaneni, baqala ukukhangeka ngokungahambiyo. Ndilahlekelwe yam intloko kwaye ndenza iphutha lokuba uMaha angamxolela uAna ... uLeonidov kunye nowe behluke kakhulu, ngokungathi zivela kwiiplanethi ezahlukeneyo. Abazali bakhe bavela kwimeko yezemidlalo. UMol ulandelelwe ezinyathelweni zikayise, umdlali odumile uLeonid Leonidov eSt. Petersburg. Yaye unina ka-Anna wayekhonza njengonjineli, umsebenzi wakhe wawubonakala ungenelisekanga kwaye ungathandeki. Enyanisweni, ugogo wayengumculi ofanelwe kakuhle, i-prima ye-Leningrad Theatre ye-Musical Comedy. Ndiyamthanda, kodwa andiyifani kakhulu nomlingisi wakhe. UMax wayehlala ephakathi kwidolophu, kuMoika, kufuphi neHermitage neDvortsovaya. Kwaye ndaphila kwi-Avenue yeVeterans-yi-suburb, idolophana enkulu. Ndaya kwisikolo esiqhelekileyo kwisithili, kwaye uMax wafunda esikolweni saseCapella. Kwakukho amakhwenkwe amakhono anomculo kuphela, enokuva. Ukususela ekuseni kuze kube sebusuku babenokufunda, ukuhlaziya, iikhonsathi zekhoyora kwaye akukho nobomi bomntu. Kwaye ndandinomdla kunothando esikolweni esiphakeme.
Ngethuba lokuqala ndithandana ngokungathandabuyo ngeklasi yesibhozo. Igama lakhe linguDima. Wayesekhulile, sele ephumelele esikolweni kwaye wasebenza njengomqhubi. Umntu omhle kakhulu, njengesiqulatho somagazini. Onke amantombazana aphupha ngaye. Yaye wakhetha uAna. Ndaya esikolweni kwilori yam kwaye ndalinda, ndimi ngecala. Kwakumangalisa! Ndashiya emva kweemfundo, kunye kunye sahamba. Kwaye wonk 'ubani wam nomona! Wayengumhlobo ondihlala ndiwuthandayo, - i-hooligan, ngokupheleleyo i-otvyazny. Wayevuya kakhulu naye. Sasifuna nokutshata. Umama akakwazi ukwenza nto. Wazama ukungqongqo, kodwa wayengenakukwazi ukumelana nam. Ngexesha elithile, xa ndithe ndawahlalisa izifundo, xa ndandifuna ukubalekela kwintanda yam, umama wema emnyango: "Andiyi kukuvumela ukuba uhambe! Hlala phantsi apha emnyango. " "Hlala phantsi, Mama. Ndiza ngaphaya "ndifuna ukubalekela kumthandi wakhe, wavuka emnyango.
- Hayi, ndiya.
"Andiyi kukuvumela ukuba uhambe!" Hlala phantsi apha emnyango! Kwaye uya kuhamba, wandule phezu kwam!
"Hlala phantsi, Mama." Ndiya kuhamba.
UAna wayengenakugcinwa. Andizange ndiyiqonde nantoni na, ndibaleka ngamaphiko othando, yikho konke! Emva koko wathandana nomnye ... Uthelekiswa nalo mfana, abanye abaphathi bajonga nje iinkukhu. WayengumBuddha waza wandinqoba ngombono wakhe okhethekileyo ebomini. Yakha njalo into. Unokuthi, umzekelo, endaweni yeeteksi ufike kwi-limousine enkulu kwaye uqhube kwi-Astoria ukusela ikhofi. Kuye sahamba siya kutyelela isihlobo sam esiseGrisi, kwaye kuyothusayo ukuba sikhumbule iindibano zethu apho. Babalekela kwiivenkile ngaphandle kokuhlawula, beba zonke iintlobo zeentengiso kwiivenkile. Ngommangaliso nje asizange sivalelwe ngamapolisa. Ngamanye amaxesha kwakunentloni, kodwa ngokuphindaphindiweyo-kumnandi. Ulutsha, lufana newayini, lubetha iintloko zethu kwaye lubaphazamise ngesivunguvungu sezinto ezonwabileyo. Kwaye uMax wayehluke ngokupheleleyo. Nokuba ndi selula. Ngokwemvelo - egcinwe, echanekileyo, efanelekileyo. Wafunda kakuhle kwi-LGITMiK, wayethandwa ngabafundi kunye nootitshala. Emva koko watshata, waba ngumyeni oyisibonelo ... Kwaye-ke. Xa beqala ukuvela kunye, kwabonakala ngokucacileyo ukuba sichaphazela njani. Ukususela kumzuzu odibene naye kwi-set, asizange sahlukane. Kodwa uMax wayehlala e-Israel kubazali kunye nomfazi wakhe, u-Irina Selezneva. Ndazi ukuba uMaha washada, kodwa, nangona kunjalo, ndathuthela kuye. Ewe, ngoku andinakukwenza oko. Umtshato wabo no-Ira kwiqela lezemidlalo lalibhekwa njengelungileyo. Inyaniso kukuba umqalisi wokufudukela kwamanye amazwe nguMax. Ngenxa yakhe uSelezneva, owayedlala indima ebalulekileyo kuLev Dodin, washiya i-Maly Drama Theatre, wanikela ngemisebenzi yakhe. U-Irina unomdla oqinileyo, wayengumdlali, nokuba ngumphathi wezemidlalo. Ukufika kwelinye ilizwe, u-Selezneva wafunda isiHeberu waza wathandwa kakhulu kwi-actress ye-Israel. Kwaye uMaha ngandlela-thile akazange asebenze, okanye wayengazi ngokwenene into ayifunayo. Ndaphenduka ndaza ndagqiba ekubeni ndibuyele, ndinikela ku-Ira. Kodwa ngoku wathi ayi. Andizange ndifune ukuqala kwakhona. UMax wayejongene nokukhetha. Ngakolunye uhlangothi, wayenetyala elikhulu kumfazi wakhe kwaye wayeziva enembopheleleko kuye, kwelinye - wayengenakuhlala kwaSirayeli. Yaye yaqhekeka phakathi kukaPeter noTel Aviv. Kwaye ke waqala ukudiliza phakathi kuka-Anna no-Ira ... Kwakunzima kuye, kodwa andizange ndiyiqonde, kuba ndingumntwana-umthandi, uzingca. Ndabona ukuba uMax uyamthanda, kwaye wafuna ukuba angandifihla, wahamba yonke indawo kunye nam, wathi ndiyintombi yakhe. Emva kokufunda udliwano-ndlebe olulandelayo, wafaka iingcamango zomona: "Kutheni utsho ngo-Ira? Emva koko, unami! Ndimele ndithethe ngam! "Andizange ndive ukuba umfazi wakhe nguIra. Emva koko, uyandithanda, kwaye nantsi enye intokazi? Wafaka iziqulatho: "Mna-okanye yena. Ukuba ungumfazi wakho, hamba kuye! Hlala kunye nalo! Kwaye konke oko! Yaye ungabibizi! "Ndiyakhumbula ngokukrakra ukuba ndiziphatha njani. Ihlazo ku-Ira. UMax kufuneka enze isigqibo sokuba angasihluthuli. Kwaye waya e-Israel ukuthetha nomfazi wakhe. Ngaphambi kokuba ahambe, wandinika ipowder, ke akukho zifowuni. Kwaye ngoku ndihamba ngeNdlela yaseGorokhovaya, kwaye ngokukhawuleza umyalezo uthi: "Ndiyakuthanda. Eyona nto! "Ngoko uLeonidov wathi konke ku-Ira baza bahlukana. Unyule! Kwaye ngoku sihlala kunye! Ubomi bethu bube njengengcamango yamagama. Kwakuyona xesha lihle kunene, lizele uthando kunye neenjabulo. Kwaye kwandipha umsindo, ndandihlala ndimomotheka ngeemvakalelo ezibuhlungu.
Ngobudlelwane bethu, ndingumntwana, kwaye uMax wayemdala. Wayeyithenga, ukutya okuphekiweyo, wandibulala, wafunda ukupheka i-pilaf yam endiyithandayo. Andizange ndikwazi nantoni malunga nokukhanyela, kwaye yonke into endiyenzele yona, yenziwa ngothando. Ndithenge into endiyicelileyo, saya kwiivenkile ezithandayo. Ndichitha imali eninzi njengoko ndifuna. Ngokuyinhloko kwi-bullshit. UMax uthi:
"Nceda, zithenge into ethile."
"Ndiphethe ikhabethe elipheleleyo!"
- Hayi, akunjalo ... Thenga okuhle.
- Ndinezinto ezilungileyo. Khangela, yiziphi iifutshane kunye neT-shirt. Ngaba ihambelane nam?
"Yonke into ihamba kuwe, kodwa ingubo, kungekhona iimpahla." Ndifuna ukuba uzithenge into exabisekileyo.
- Kutheni? Ndiyakuthanda!
Mhlawumbi, uMax wandichukumisa kwinto yokuba ndakhula. Kodwa andilungiswanga ngemali, kwi-luxury. Into ehlakaniphile kum kwaye ngoku kunzima ukuthenga, kungcono ukuthayipha ezininzi ezahlukeneyo, kungabi kubiza. Into eyona nto yayimnandi. ULeonidov wayevame ukuzama ukufundisa, kwaye mna, ngokuchaseneyo, wayekhohlisa ebukhosini bakhe ngaphezu kokuqhelekileyo. Kwaye nangona sasibukeka sibukrakra, ukuhluka phakathi kweminyaka kunye nokuziphatha kwabonakala kakhulu. U-Max uneminyaka engaphezu kweshumi elinesithathu ubudala. Kwaye ngamanye amaxesha sasiphoswa nguyise kunye nentombi. Kwaye nathi sinokuzonwabisa ngokudlala umdlalo. UMax uthe eli lixesha lokuqala ebomini bam ... ndicinga ukuba kwakunjalo. Inyanga ngaphambi kokuba siqhelane noLeonidov wabhala "Intombazana-Umbono". Njengoko wathetha-wayenobungqina bothando. Kwaye ndabonakala ebomini bakhe. "Intombazana-Umbono" yaba yintsimbi. Kwaye kwangoko, uzuko lwaqala ukubuyela kuMax. Wabhala iingoma ezintsha, wabumba ngokukhawuleza naphi na? -kusemini kwasekuseni, kwindawo yokuhlambela. Uthi bonke bebonke ngam, ngenxa yam ... uMax wasebenza nzima. Uvele nje akhululwe i-albhamu, kwaye sele sele eqamba iingoma zomnye olandelayo. Akazange avume nayiphi na intetho - kwakudingeka ukuba anqobe abaphulaphuli. Kwaye kwenzeka njalo: unamakhonsathi kulo lonke ilizwe, kwaye ndinendwendwe eKazzan, ixesha elide. Ndishiye, sasiphoswa. Wabizwa izihlandlo ngezigidi ngosuku, waphupha intlanganiso, kodwa wayenomsebenzi oxakekileyo kangangokuthi wayengenakubalekela. Kwaye ke ndagqiba ekubeni ndikumangalise. Ikhonsathi yakhe elandelayo yayiseNizhny Novgorod. Ndifumene kumlawuli kaSasha xa uLeonidov efika apho, kwaye wafika. Ndalindela kwisikhululo. UMaha wayengazi nto, uSasha akazange akhiphe. Kwaye ke isitimela safika kwaye uMa wandibona ... Wayenobuso obumangalisayo! Wagijimela kum iqonga, wamkela, waqala ukumanga. Emva koko uthi:
"Mamela, ngaba kufuneka sahlukane?" Ngaba akufuneki ukuba sibe kunye?
- Kodwa unokhenketho. Kwaye kum.
-Aye. Ngoko akunakwenzeka. Andifuni. Ndade ndifumene oku. Akuyithando kwaye kungekhona ubomi ...
Andizange ndiphikisana. Emva koko ndagqiba ekubeni ndiyeke umsebenzi wam. Intloko yezemidlalo iViktor Abramovich Novikov ndivumele ukuba ndihambe. Enyanisweni, wathi: "Hamba, thabatha uhambo. Kungekudala uza kubuya. " Wayeyazi uMax kwaye wamphatha kakuhle. Kodwa ke, mhlawumbi, wabona abancinci abaselula. Kwaye andiyena owokuqala ukugqiba kwinqanaba kwaye abe ngumfazi othembekileyo. Wayeyazi ukuba iphela njani. Ngoku ndihlala ndiseduze noMax - ngokurekhoda umculo kwi-studio, kwiingxoxo, kwiikonsathi kunye nokufayiliza. Wayeyithanda kakhulu. Sasinothando olunjalo kangangokuthi sasingakwazi ukusiqhawula ngaphandle kwexeshana. UMax wayefuna ukuba undiphathe ngawo onke amaxesha. Saqhaqhazela kwaye sawanga yonke indawo, singayithobeli mntu. Kwisethi yefilimu ethi "uMoya", ngexesha lokuphuka, balala phantsi kwe-asphalt kwaye balala. Saxelelwa: "Yeka! Sekunokugulisa kukujonga! "Kodwa asikwazanga ukunceda. Savuya. Ndinehlabathi elityinwe kuMax, ndilahlekelwe ngabahlobo kunye namantombazana. Kwimbali ethile kuthiwa abantu bahlulwe baba ngama-halves. Kwaye safumanisa, saba sisidalwa esisodwa. Ngoko, emva kweminyaka embalwa, bekuphelile, kwabonakala ngathi isandla sam sagqitywe, umlenze wam ... intloko yam inqunyulwa, imeko yam yayisabekayo. Kwaye, mhlawumbi, naye. Kodwa ngaloo mihla sasisonwabile kwaye sasicinga ukuba ingunaphakade. UMax wayenomona kakhulu kum. Kuzo zonke. Uthe yena wayengazi ukuba yintoni umona, kodwa ngoku uyahamba. Wandibuza ukuba ndigqoke ngokuthobeka. Kwaye kum, ngokuchaseneyo, ndandifuna ukubukeka kumhle, u-sexy - kuye. Ndimthanda iingubo ezimfutshane kunye neebhola ezigxininisa kulo mfanekiso. Baya kakhulu kum. UMax wadlala kakhulu kwiiklabhu. Ndandibukela ikhonsathi kubaphulaphuli. Abaphulaphuli babengayazi ukuba ndingubani, yaye ngokuqhelekileyo amadoda eza kum neentetho zokudibana okanye ukudanisa. Ewe, ndenqabe, kodwa uMax wayesakhathazekile. Ngesinye isikhathi ngexesha lamakhonsathi ndiqala ukudlala ngothando nomnye umntu kwaye ndingazange ndiyeke. Kwaye uMax ukusuka kwisiteji wathi: "Suka kuye! Lo ngumfazi wam! "Wandula ke wathi:" Ngexesha elilandelayo, hlala phantsi kwindawo ethile ekhoneni. Kuya kuzincama kum. Andifuni ukuhlaselwa. Faka i-turtleneck emnyama, mhlawumbi ngoko abayi kuwuqwalasela. " Saye kunye ixesha elide kwaye sifuna kakhulu ukutshata. Kodwa uSelezneva akazange avume ukuqhawula umtshato. E-Israel, imithetho yayo kunye nomtshato kuya kunzima. Ira wacela isamba esikhulu. Emva koko wandithukuthelela, kodwa ngoku ndiyayiqonda - ukuthuka kwakuthetha kuyo. Ngoko waziphindisela kuMax ngokukhohlisa. ULeonidov waqesha abagwebi e-Israel, kodwa ityala lalide kwaye libiza. Sasibukeka sibuhlungu, kodwa umahluko phakathi kweminyaka kunye nokuziphatha kwabonakala kakhulu. Kwaye ngamanye amaxesha sasiphoswa nguyise kunye nentombi.
Kubudlelwane bethu, ukungabikho kwesitampu kwipaspoti kwakungekho mpembelelo. Siphila ubomi bentsapho bokwenene. UMax sele sele eqale ukwenza imali enhle, kwaye sathenga indlu ngaphakathi, kwiBetshaya Moskovskaya Street. Ngaba ukulungiswa. Bakhetha ifenitshala. Kwakuyimnandi kakhulu. Kwimemo yomhlobo wakhe, u-Andrey Makarevich, uMax waqala ukuqhuba inkqubo yethelevishini "Eh, iindlela." Kuba ukudubula kwakudinga ukuhamba ngehlabathi. Sahamba ndawonye. Ndangena kwinkampani enhle - uLeonid Yarmolnik, uAndrei Makarevich, uBoris Grebenshchikov. Ndandikulungele ukuthetha ngaphandle kokulala nokuphumla, ukubona iindawo ezintsha. Ukuba uMax kwakungekho lula ngathi. Ngexa ndandidla, wayesebenza. Wayehamba phambi kwekhamera ekutshiseni, okwenza iincindi ezingapheliyo. Kwaye iziganeko zokuhamba kuye zaba luvavanyo olunzulu. UMax uthanda ikhaya kunye nobudlova kakhulu. Kwaye andiyi. Andizange ndikhathalele indawo yokulala, yintoni ekudliwayo, kunye neyona nto ibalulekileyo ukuhamba. Mhlawumbi, kwakukho kwezo zihambo apho ukukhathala kukaMax ebomini bethu kwaqala ukubonakaliswa okokuqala ngqa. Kodwa andizange ndiyiqwalasele. Ekugqibeleni uMax waqhawula umtshato, kwaye saqala ukulungiselela umtshato. Andikhumbuli nokuba uthe wandenza igosa elisemthethweni. Kwakufana nomcimbi okwenene. Ngeli xesha sasihlala ndawonye iminyaka emithathu. Abazange bahlule kwaye babengenakucinga ukuba siza kusenza lunye usuku. UMax wayefuna ukuba ndiyithenge ingubo yomtshato. Saya kwivenkile, kwaye ndakhetha iingubo ezintle zokugqoka, ngamaphiko kunye neentyantyambo eziluhlaza. Xa ndazama, uMax wakhala. Ndandichukumisa kakhulu kule ngubo, njengentombazana. Ndisawugcina. Ukulinda kwikamera kum mama: ngamanye amaxesha ndifuna ukumkhangela, khumbula-ukuba kwakunjani kunye nokuba ndiphi. ULeonidov wanquma ukulungiselela ukubhiyozelwa kwiNdlu yabaQebisi. Sasinomtshato kunye nekhonsathi yamatye ngexesha elinye. UMax wahlabelela, abahlobo bethu bacula - uLesha Lebedinskaya, uSergei Galanin, noAndrei Makarevich, uBoris Grebenshchikov ... Kwaye iintsuku ezimbini kamva uLonidov wangithabatha kwintshontsho. Sayeka iintsuku ezimbalwa kwidolophu ethile kwaye sahamba ngaphaya, ejikeleze uMhlaba. Ngothando lwam lokuhamba, kwakuyisipho sobukhosi. EParis, yahamba esuka eBarbados, okanye eLos Angeles, ukusuka kwindawo ethile. Kwaye eFransi - inja ebandayo, imimoya, imvula. Ngexa sifikile ehotele, kwakubusuku. Kodwa ndi selula! Andinandaba! ULeonidov wayekhathele waza walala. Ndithi:
"Max, vuka, hamba!" Wambona.
- Ukuhamba! Ndololoko ndiphupha eParis!
"Nceda, masihambe ngomso." Siya kuhamba njengoko ufuna. Kwaye ngoku kufuneka ndiphumle.
- Ngaba wena, andinakulinda kude kube kusasa! Vuka!
"Kodwa imvula apho!"
"Siya kuhamba emvula." Vuka ngoku! Woza!
Ndacinga, ndafunga. Kwaye wayediniwe. Wonke umntu unelungelo lokhathala. Iindiza zazinzima. Sele sele evelele zonke ezi zixeko, kunye nangaphezulu. Ndandwendwela. Kwaye andizange ndiyiqonde. Kwakubuhlungu.
Emva komtshato waqalisa ukukhumbuza ukuba ndiyindoda yakhe. Ndazama ukuchaza ukuba "umfazi" ngumgcini. Kwaye andifuni ukutshintsha ubomi bam, ukuyeka into ethile. Kwaye akazange azive 'ngokwakhe umgcini'. Unomntu onjalo - ndinokwenza konke, kodwa kuphela ukuba ndifuna yona. Ndafunda ukupheka, ukuhlamba, isinyithi ... ndenza yonke imisebenzi yasekhaya. Kunoko, ndadlala umdlalo: Ndingumfazi-ndiyibhinqa i-shirt, ndixakeke endlwini. Ndade ndiyazi kakuhle ukutya kwamaNdiya! Kodwa ngokukhawuleza ndibandezelekile. Ngoko, siya kudlala ngokuchaseneyo! Kwaye kwafuneka sipheke uMax ... Kwakungekho umthwalo kuye ekhitshini. Kodwa into yokuba andifuni ukumnyamekela, uMax wakhala. Wayeliphupha kwikhaya lentsapho. Wathi: "Ndifuna uxolo, kwaye akukho nani ekuphumleni kwam ubomi kwaye akunako." Ndandicatshukiswa ezi ngxoxo. Ngaphambili, wayefuna iimvakalelo ezintsha neemvakalelo, kwaye ngokukhawuleza wayefuna ukuthula! Ndandixelela: Andizange ndenziwe nje ngenduduzo ekhaya. Kwaye ukuba andizange ndiphile ngokulindelayo, ke akusiyo iphoso lam. Ndandihlala kwaye ndiza kuhlala njengaye. Kwaye uMax uya kufuneka amkele. Kwikonsathi elandelayo ndandimele emva kweembononongo kwaye ndandicinga ukuba: yaba yindlela yam yobomi - ukuma emva kwendawo kwaye ndilinde uLeonidov. Kwaza kwandula ndabanjwa nge-melancholy. Ubomi bulahlekelwe intsingiselo yayo! Andifaneli ixabiso ngokwalo, kuphela njengesihlomelo kuMax. Ndaphinda ndifuna ukuba ngumdlali wokudlala. Xa waxelela uMayela ngale nto, akazange amxhase. Wayefuna ukuba ndichithe ixesha elininzi kunye nosapho lwam. Emva kweengxoxo kunye neengxabano esazithe zazingqongileyo - sanquma ukusebenza kunye. Ndaqhagamshelana noMax kwividiyo. Emva koko banquma ukudlala umdlalo. Uvunyelwene nomlawuli uVictor Shamirov, kwaye waqala ukuxubusha nathi umdlalo "I-Filly ne-Cat". Kodwa kwavela ukuba ukusebenza ngokubambisana kunzima nakakhulu kunokuhlala. Ukuziphendulela kwanda kuba yimpikiswano. Ndingum maximalist: kuya kuba nayiphi indlela, okanye akunjalo. Kwaye akunakwenzeka ukusebenza kumsebenzi. Kwaye ke abantu abanakwenzeka. Akukho nto iya kuvela kuyo. Ubuqili obuhlangeneyo bubuhlungu kakhulu imeko. UMax wangena emsebenzini wakhe, ndaza kwindwendwe yaseKomissarzhevskaya Theater - ukuba ndicele emva. Ba ndi thabatha. Kwakhona ndaziva ndivuya kakhulu. Ngelo xesha, ngokucacileyo ukuba uqaphela ukuba ubomi obudibeneyo buya kwehla, saqala ukucinga ngezinto ezinokubumbanisa: malunga nomntu oqhelekileyo kunye nomlilo kunye negumbi elikhulu lokuhlala kwabahlobo. UMax naye uthetha "ngabantwana", kodwa ndazikhumbula. Wayengakulungele ukuba ngumama, uhlale nomntwana, utshintshe i-diapers. Kwaye uMax wayefuna abantwana. Emtshatweni kunye ne-Ira abazange bavinjelwe yi-midlalo, ukuhlaziya, ukuwela. Kwaye kwavela into efanayo - umdlali-mdlali-mfazi, akaphindelanga kumntwana. Kwaye uMax waya kumda weminyaka emashumi mane waza waqonda ngokucacileyo oko wayekufunayo. Wayefuna indlu epholileyo, umfazi onomdla kunye nabantwana. Ndandisetyenziswa kwaye ndifuna ukuba ngumntwana ozithandayo kuphela kaMax. Kwaye yonke into ishintshile! Waqala ukufundisa, ukufuna into ethile. Andizange ndiyithande, kwaye mna, njengomntwana ophangiweyo, waqala ukwenza ngokungahloneli. Andizange ndiphuthumele ekhaya emva kokuhlaziya, ndinezinto ezinokuzenza, iintlanganiso. UMax wenyuka ngokugqithiseleyo kwaye wadibana nemibuzo: "Uphi na?", "Kutheni ubambezelekile?" Ndandibhala into ephendulayo. UMax waphukiswa ekuqaleni. Emva koko wavalwa. Ukucinga ngento ethile. Saxabana. Ngamanye amaxesha bahlala bathule, bahlala bexhala. Maxa wambi babememeza ngokukhawuleza baze baxolelane ngokukhawuleza. Kwakhona baphikisana. Ngenxa yokuba ndifuna ukuphila ubomi bam, kwaye uMaha wayengenakukuthwala.
Ndaqala ukuhlaziya umdlalo othi "Isiqhwithi" esekelwe kumdlalo kaShakespeare. Wavuya gqitha. Namanje: indima ephambili, umlawuli onetalente, amaqabane amangalisayo. Ndandingathetha kuphela ngale nto kwaye ndicinga-konke kwachithwa kwinkqubo yokudala. Imicimbi yentsapho kunye noMax baye kwi-burner yangemuva. Abahlobo bakaLeonidov babenomdla. Yiyiphi into eyayivakalayo inomdla: "O, yintoni ehlukile wena!", Ngoku kwaba isigwebo - "Uhluke kakhulu." Enyanisweni, abahlobo bagcina umgama wabo: UMax - umntu omdala kunye neengxaki zeentsapho zakhe uya kuzigqiba. Kodwa kwakukho umntu oyedwa ongenakubona uMax unxiliseko, - unina. ULeonidov no-Irina Lvovna banalo ubudlelwane obumangalisayo. Unina kaMax wafa xa wayeselula, kwaye umfazi wakhe omtsha wamkhulela. U-Irina Lvovna wanika uMax ubomi bakhe bonke, uyayithanda indlela abantwana bakhe abangayithandi ngaso sonke isikhathi. Kwaye uMax uphendula ngokufanayo. Andikwazi ukuthetha ukuba akazange amkele. U-Irina Lvovna, into ephambili kukuba uMax abe nolonwabo. Nangona, ngokuqinisekileyo, waphupha omnye umfazi ngenxa yonyana wakhe-ukuze aphule iincinci zothuli aze amanga iinyawo zakhe. Kwaye kwimeko yethu kwakungekho njalo. Kwabonakala ku-Irina Lvovna ukuba uMax undithande ngaphezu kwam. Kwaye le nto yayingamfaneli. Kodwa okokuqala wayethe cwaka. Xa waqala ukubona ukuba kwakungalunganga kuMax, ukuba wayebuhlungu, wayeka ukuzikhusela. Wathi: "Kutheni ukholwa nguye? Kutheni kunjalo? Ukhohlisa! Akanakho ukuphanda! Unemveli! "Ngelishwa, u-Irina Lvovna akayena kuphela. Oogxa bam enkundleni yemidlalo nabo bazama ukufaka umlilo kumlilo ... andizange ndiwuqwalasele, kodwa abaninzi bethu babenomona. Asizange silifihle ulonwabo - banikezela i-interviews, ukubamba isandla kubonakala kwiindawo ezamkelekileyo. Abantu babone isimo sengqondo sikaMax kum. Abanye abantu bacinga ukuba andifanelekanga. Kwaye kwangoko kubekho ithuba lokuxabana nathi, basebenzisa oku. Kwiindawo zokudala, "abanqwenela kakuhle" banelungelo. Kwaye andizange ndiyiqonde le nto, ndiziphatha ngokukhululekile, njengokungathi ndingenanto ebantwini. Kwiikonkethi, uMax wadlala ngokunyanisekileyo, wayedlala. Bathi kuye: Khangela, akakuthandi, unjalo-nanjalo. Ngokuqhelekileyo, i-funnel ishintshile, iphihliwe ... U-Max wayenzima kakhulu ukusinda oku. Wayebonakala esazi ngaphambili ukuba uya kuba njalo, ekulindeleke ukuba ayenze kum kwaye wayezithukuthelele. Isizathu sasiyiphutha endiyifumene xa sidibana. Emva koko, ekusetyeni, ndandiziva ndathi: ngumntu wam. Kwaye ndandidla ngokukholelwa kwimiva yam. Ndiye ndandisoloko ndibalandela kwaye ndingamelana nokuthanda. Ngomso olandelayo, uMax wangimema kwikontoni yakhe - kwimeko yonyaka omdala omtsha. Emva kwekhonsathi esishiye kunye. Sachitha kunye ngokuhlwa. Kwaye ndahlala naye. Ngangoko. Ewe. Kwaye andinamahloni ngawo. Ndabona ukuba wayemthanda ngokwenene, wandixelela, naye. Kwaye kwakungenangqondo ukuzakhela kum ngenxa yokuba sobabini sinomuzwa ofana kakhulu nothando. Kutheni ufihla kuyo? Ngothando akukho nto ihlazo! Kodwa uMax wacinga ngenye indlela. Akazange akhumbule ukuba ndihleli, kodwa ke, xa ubuhlobo bethu buhamba kakuhle, ndaqala ukubuza:
Ngaba ndiyakuthanda ngokukhawuleza? Okanye wena nabani na onako?
- Kakade, ndandiyithanda ngokukhawuleza.
Wazenza ukukholelwa, kodwa lo mbuzo waqhubeka ukumthuthuzela.
Kwaye xa u-Irina Lvovna kunye "nabacebisi abanomdla" beqala ukuthetha ukuba ndinemveli, wayekholelwa kuba wayenomona, kwaye waqiniseka: Ndiyahamba nomntu wokuqala ndidibana naye, njengoko ndandisoloko ndihamba naye. Ngokubanzi, izikhalazo ziqokelelwe, ziqokelelwe, kwaye ngolunye usuku yonke into yawa. Sasihlala ngoko kwizindlu ezimbi. Kwakukwalamano kaMax. Bathengisa imali yabo kwaye batyala imali kwixesha elizayo, kwakhiwe kuphela. Indlu yayisecaleni, encinci, igumbi elinye, emnyama, phantsi, phantsi kakhulu, ngokusemhlabeni. Kwakukho amagumbi kwindlu. UMaha akazange anditshele ngabo de ndabona yona. Kuloyiko! Ndiya ekhitshini, kwaye ukutya kwethu kutywa, kudliwe! Ndandisoyika ukuba ndedwa apho. Thina uLeonidov kwafuneka ahambe ngeholide. Ngomhla ngaphambi kwaloo kusasa, ndaya kwi-rehearsal, kwaye ndabuyela phantse ebusuku. UMax wavula umnyango.
"Uhlala phi ixesha elide kangaka?"
- ndiyabona ...
Izinto eziqokelelwe uhambo. Saya kulala. Ngentsasa kwakufuneka ndihambe kwindawo ethile. Kungekudala. Xa ndibuya, uMaha wayengekho. Akukho nto yezinto zakhe. Kukho inqaku kwitafile. Kukho amagama amnandi kuwo. Ndiyifunde kaninzi, andinakuyiqonda intsingiselo: "Ndikunike ubomi bam bonke ... Kwaye ... Cinga ukuba ndakufela." Ekugqibeleni ndaqonda. Wagqiba ekubeni ndiyinyani kuye, ukuba ubomi bethu kunye naye buphelile. Ama-grudges amakhulu aqokelelwe kuye. Asizange sithethe ngobudlelwane bethu. Ngoko akunakwenzeka. Simele sithethe, sixoxe, sichaze omnye nomnye izenzo kunye neminqweno. Yaye wayethe cwaka. Kwaye ndathula. Kwaye uMax wagqiba ekubeni kufuneka ahambe, ndinike inkululeko. Akazange ashiye ukuba sithetha. Kwaye ke ... Wayecinga ukuba bekuphelile, kwaye walala, wabaleka. Xa ndihamba ngokushatyiswa, ndanomgomo omnye - ukufumana uMax, ukuthetha nokuchaza yonke into kuye. Ndazi ukuba uyandithanda, ukuba xa sithetha, uMax uza kubuya. Mhlawumbi, kwaye wayekuqonda oku. Ngoko wayefihlakele kum. Ndize ndifihle ngokude ... Kususela kumzuzwana ndabuyela kwindlu, kwaye nanamhla asizange sithethi. Ikoyikeka. Le nto yona nto yenzeke phakathi kwethu. UMax wabhala kwinqumpa ukuba ndivumele ukuba ndihambe kwindlu yeeveki ezintathu. Wandishiya ngamadola angamakhulu amathathu. Yonke into. Ndandibetha, ukuhlaziya - yonke into yayingena kwii-tartaras. Ndaqala ukukhangela uMax. Ndiyindoda. Kwakuyinto ehlaziyileyo, ukuhlambalaza, ukunyaniseka. Njenge-maniac, ndihamba ngeenxa zonke nabahlobo bakhe, ndibabiza, ndawagcina kuloo ndawo apho uMax angabonakala khona, wayesemsebenzini kwindlu yakhe. Akukho nto. UMax walala. Xa ndifuna ukuthetha no-Irina Lvovna, wavala umnyango phambi kwam. Abanye abahlobo babesazi kakuhle apho uMax. Kodwa a bazange. Ndicinga ukuba savuya ukuba saqhekeka. Babecinga ukuba uMax akazange ajabule nam. Ndilahlekile ngokupheleleyo. Wakhala njalo, akazange aqonde nantoni na. Kwaye kufuneka ndidubule, kufuneka ubalekele eMinsk. Ndiza, kodwa andinakusebenza. Ndisela ezinye iipilisi ezithuthuzelayo. Umvelisi uyamemeza esithi: "Uqhekeza amahlumela! Uhlawula isohlwayo, imali eninzi! "Kwaye andinakuyiqokelela, ubomi bam buphelile, yonke into iphukile, yonke into iyawa.
Ngethuba sasihlala noMax, andizange ndisindise nantoni na, ayizange ihlehlise, njengabafazi abaninzi. Ngokuqhelekileyo, wahlala engenakhaya, engenayo imali kwaye engenaye indoda. Ndandifuna inkululeko kwaye ndafumana ngaphezu koko. Kodwa uMax wayenzima. Wagqiba ekubeni undibethe ebomini bakhe. Khumbula, uyeke ukuva uthando. Kwaye akulula. Yingakho ebendibona. Kwakunzima kakhulu kuye. UMax wayeyika ukuba akayi kuthatha, wayeya kubuya kwaye yonke into yayiza kuqala ngenye entsha. Wayegula nam. Kodwa ngaphandle kwam - ngakumbi nakakhulu. Njengengoma yakhe: "Konke akunakwenzeka kwaye akukho nto ngaphandle". Ndafunda ukuba uya kuba nekhonsathi kwiklabhu encinane. Ndafika, ndaxelela abalindi ukuba ndinguye umfazi kwaye ndifuna ukuhamba. Baya kuMax, ndaqala ukukhangela uMax. Kwakuyi-insanity, ukunyaniseka. Njenge-maniac, ndayahamba kunye nabahlobo, bebizelwe, balinda umama wakhe yokuhlala ... ukuze bafumane imvume. Waphendula wathi wayengayazi le ntombazana, kwaye wandibuza ukuba ndikhishwe. Umlindi wamemeza esithi: "Uphi na ukuphula? Akanayo umfazi! Phuma apha. " Kwakubuhlungu, kuhlazisa. Kodwa ndacinezela, ndifuna ukuthetha naye. Azange avumele. Emva koko ndambona esitolo. Waye kunye nezinto zokutya kufuphi nerejista yemali. Wememeza wathi: "Max!" Wandibona, waphosa ukutya waza wabaleka. Ubalekile nje. Wayengazi indlela yokuziphatha nam. Wayenokuphela kuphela. Emva kwexesha lakhe igqwetha lakhe libiza. Wathi,
ukuba kufuneka sixoxe ngendlela yokwabelana ngempahla. Ndaphendula:
"Ndineemeko enye." Ndifuna ukudibana nokuthetha noMax.
"Akunakwenzeka." Emva koko ndathi akukho nto ndiyifunayo kuMax. Igosa lafika, kwaye ndasayine iphepha, ndilahla nayiphi na ibango lezinto eziphathekayo.
Kwakubuhlungu kakhulu. Sasithandana, kwaye kwakungekho nentshisekelo kwiimvakalelo zethu. Kutheni, emva kokuhlukana, kufuneka uhlule ipropati, ucinge ngenye inzuzo? Hayi, andiyazi ukuba njani. Andizange ndiyenze kwaye andizange ndibe nako. Ndandifuna nje - ukuthetha. Kodwa kule sicelo uMadi wangenqaba. Xa sasiqhawula umtshato, kwafuneka size kwiofisi yokubhalisa kwaye sibeke isignesha yethu. Ndazi ukuba kwakuya kuba nguMax, kwaye ngegosa lakhe lacela ukuba emva kokuqhawula umtshato, wathetha nam. Igqwetha lathembisa ukuba liyilungiselele, ukukholisa uMax. Ndatshitshisa kakhulu le ntlanganiso, ndaza ndaya kwi-psychologist, ngenxa yokuba ndimele ndihlale, sithethe ngokukhawuleza uze ungalili. Kodwa ndandisaba kakhulu. Kwaye ngandlela-thile endleleni eyalahlekelwa ipasipoti yakhe. Ulahlekile ngokwenene! Andizi nokuba njani. Ndandixhalabile kakhulu, ndisela amanzi amaninzi eepilisi. Xa ndafika kwi-ofisi ye-registry, ndanyuka ndaya esikhwameni sam, kodwa andinayo ipasipoti! UMax wayevutha kakhulu. Wayeqinisekile ukuba ndenze ngenjongo. Emva koko kwafuneka ndibe ne-passport entsha, kwakungekho buqhetseba. Kodwa uMaha akazange akholelwe. Sonke sahlukana. Nangona ndiwusayine umthetho onxamnye nomthetho ngaphandle kwepaspoti. Ndiqinisekile ukuba emva koko uza kuthetha nam. Kodwa uMax ngokukhawuleza washiya, wangena emotweni waza wahamba. Wagijimela kummeli:
"Uthembisile!" Wa welula izandla
- andinakwenza nantoni na ...
Kwaye konke oko. Ndishiywe ndedwa. Akukho ndawo yokuhlala. Umama wayehlala noyise wakhe. UMa kwaye ndamthengela indlu entsha kufuphi nekhaya lethu elizayo. Kodwa yayisalungiswa. Kwafuneka ndicinge-into endiyenzayo, indlela yokwenza imali. Kwaye ndaya eMoscow. Ndibahlobo eMoscow - uRegina Miannik noDina Korzun. Ndisondele kakhulu kwaye ndithandwa ngabantu. Ba ndixhasa. Ndandula ndahlala noDina, ngoko nguRegina. Waqala ukwenza ifilimu, ahlaziye into ethile kwimidlalo yaseshashalazini. Emva koko ndamenywa kwiichungechunge ze-TV uMongoose. Ndiyindoda evulekileyo ebomini, kwaye ndiyamangalisa ukuba uMaha wandiphatha ngokunjalo. Njengokuba ngaba neenkukhu, ngubani oye wahlwaywa, wahlambulula kwaye wawaxabisa, waza wada wathatha waphonswa ngaphandle ... Njengaye, hamba uye ngokwakho. Kwavela - ndinako. Ndakuqonda ngokukhawuleza oku. Ndaqala ukufumana imali nokuthumela imali kumama. Sasilungisa kwindlu yakhe. Kwaza ndandicinga ukuba ndiyinkosikazi yam, andithembele kumntu. Kwaye ndandiyithanda. UMax emva nje kokuqhawula umtshato, wayenomntwana. Kwaye ndaya emsebenzini. Nangona, kunjalo, ndineenveli. Omnye wabo unomntu oshishino, oontanga. Nangona esemncinci, wazuza kakhulu kwaye, ndicinga ukuba, uya kufezekisa ngakumbi. Sinobudlelwane obuhle. Kodwa kungekudala yena, njengoMax, waba nexhala kuba ndizicwangciso zam, ukudubula, ukwenza izinto. Umntu onamandla kunye nemali, usetyenziselwa yonke into yokulawula, ukuthobela abantu ngentando yakhe. Kwaye umhlobo wam ufuna ukuba ndihlale ekhaya ndilindele. Kodwa ndaqonda ukuba andisayi kuphinda ndihluthe izicwangciso zam okanye umsebenzi wam nabani na. Ubomi bam, andifuni ukuzilungelelanisa kwiminqweno yomntu. Ndenze oko kanye kwaye andiyi kuphinda ndiyenze kwakhona. Ndenze izinto ezininzi. Kwi "Swan Paradise" Ndadibana no-Alena Babenko, saba ngabahlobo. Ndinebahlobo-kwaye aba babehlobo bam, kungekhona abahlobo bakaMax, abandibethe ebomini bam ngokukhawuleza xa saqhekeka. UMax wayenolwazi oluninzi, kodwa akukho namnye wandinceda kumsebenzi wam, andizange ndibuze nto, nangona aba bantu banamathuba amakhulu. Ndihlala ndihlala njengale "Hayi! Fut! "Kulula! Kubonakala kum ukuba le yindlela yokuphila. Ndiqinisekile ukuba uThixo akayi kundishiya. Ihlala idonsa, inikeza ithuba, amandla, ndinokusingatha nayiphi na imeko. Xa uMax kunye nathi saba sibini, ndandinomona. Wandithanda ngokwenene waza wangiphanga. Wabonakalisa ihlabathi. Azange ayikhanye into. Ndandisoloko ndikulungele ukubamba isandla sam. Yinyaniso. Kodwa kukho enye inyaniso. KuMax, ubudlelwane bethu babaluleke kakhulu, kwaye mhlawumbi nangakumbi. Uthando, loo mvakalelo enamandla awayevelela yona, yamkhuthaza. Wabhala ezininzi. Kwaye kwabulela kule ngoma kwakhona yaziwa.
Anna Semenovich, ubomi bomntu
Udliwano-ndlebe noMarina Mogilevskaya
Indlela yokwenza iiphulaphu ezinkulu ngemizuzu engama-20?
Ukunciphisa igazi le-calcium kunye ne-osteoporosis
Ziziphi iimveliso ezikhulayo?
Yintoni eluncedo kwiingqimba zommbila
I-stew nge-ngulube, imifuno kunye ne-noodle
I-meringue ye-chocolate kunye nama-alimondi
Umfundisi webele yenkukhu
Isipho esihle kunazo zonke kubantu
Ukuxela i-Fortune emanzini ngexesha leKrismesi nakwiKrisimesi
Izimpawu zokukrexeza kwamadoda
Iifilimu ezininzi zowesifazane ngo-Matshi 8
Kissel kusuka kwi-gooseberries
Iingoma malunga nokuya esikhathini